Lapho abafundi wabuyela UK emva kwemaholide esikoleni, abazali abakhathazeke kakhulu umqondo wokuthi uthisha kuzoqala ikota entsha nge ngokufunda izindlela Pedagogical, okuyinto, njengoba kwaboniswa yindlela ucwaningo lwamuva, akusebenzanga.
Omunye, isibonelo, the "izinganekwane bokufundisa 'main - bokukholelwa izitayela eziningana nokugcina ulwazi ezifana ezibukwayo, sokuzwa, noma kinesthetic, nokuthi umfundi ngamunye udinga indlela ngamunye ohlelweni lokufunda. Kukholakala ukuthi, kuye ngokuthi uhlobo olunjani okuqonda ngayinye umfundi ngamunye, umuntu impahla zisamukele kakhudlwana, ethula ngokubhala, umuntu - ekulaleleni, kanye wonke umuntu angafunda isihloko kuphela ngemva Ukusebenzisa bafunda.
izitayela zokufunda ngamunye ziye zasetshenziswa ezikoleni eziningi abafundisi ezihlukahlukene eyala, naphezu kweqiniso lokuthi ukusebenza kwabo ngesikhathi ingakamiswa lawo. Ukwanda le ndlela ka efundisa Uhlelo uthisha ukuqeqeshwa waphinda kuqinisekisa ukuthi isistimu ezijulile, ngaphandle ubufakazi besayensi. Emva kokuthola ulwazi olufanele, othisha abasezingeni ezihlukahlukene silisebenzise umkhuba ezikoleni eziningi.
Ake sibheke ukuthi kungani lezi zindlela zisasetshenziswa ngothisha.
Ingulube in a xhoxha
Umbuzo Simple e injini yokusesha "Google", "ukufundisa isitayela" ukhiqiza cishe abayizigidi ezingu-5,9 amareferensi. Amawebhusayithi amaningi anikezelwe izinqubo ezifanayo, noma ukuhluka kule indaba ephathwayo. Futhi ngamunye wabo 'ukuklabalasa' mayelana imfundo enjalo, kodwa zimbalwa ozama ukuqinisekisa izinganekwane abafanele amaphuzu anamandla.
Ukuthola izixazululo ngempumelelo
Ucwaningo e-psychology kanye imithi baye babonisa ubuze indlela ngamunye ekuqeqesheni. Ukubukeza ehlelekile futhi esibucayi imodeli 71 babika yokufundisa, 13 zazo awubiza ngokuthi "core". Kodwa, ngeshwa, kwaba eyanele iqiniso lokuthi ngo-2007 uProfesa Myron Dembo futhi Keyt Horvard ukuza isinqumo isidingo ukusebenzisa indlela siqu abafundi enqubweni yokufunda yonke.
Ukwethulwa izitayela yokufunda ngabanye izikole akuzange ekhiqizwa iyiphi imiphumela ingabonakali. Kwakungeyona futhi wafakazela ukuthi ukusebenza ngempumelelo kwalezindlela zokudlulisela, noma abanye ezifanayo kuzo.
izinganekwane Common ngokufundisa izitayela
Ucwaningo olwenziwa ngo-1980 - 1990, baye babonisa ukuthi nobunzima enkulu okuletha izingane esikoleni, itholakala lokuthi ukuthi sonke zisebenzisa% 10 kuphela zobuchopho, nabanye ubuchopho esithuthuke kabanzana ngakwesokunxele, kanye abanye - kwesokudla. Futhi lezi umehluko izingane ukubangela izinkinga ekwakhiweni inqubo yemfundo.
Khona-ke emhlabeni uhlelo osolwa lapho othisha abaqeqeshiwe nezikhungo namanyuvesi, ukufundisa izifundo kanye trainings. Ngisho eMnyango Wezemfundo ukuthi othisha eyayigcwele yalutho, abakwazi ukubasiza emsebenzini wabo kanye nolwazi.
Kodwa okumangalisayo survey yamuva ibonise ukuthi izindlela lapho othisha bafunda kulokho abakuzwa ngokuqondene amanyuvesi, akuzona zonke kusetshenziswa umkhuba (53% kuphela), eziningi futhi usebenzise ulwazi kusukela nozakwethu abanolwazi kakhudlwana (41%), kanye ukuqeqeshwa (30 %).
Kuyasiza ukuthi ukuba khona izinganekwane ku Indlela yokufunda?
Empeleni, kuwo wonke inganekwane likhona iqiniso kulokho. Vele wenze 100% ithemba ngamunye wabo, izindlela abathola ezifana iqiniso eliphelele. Yiqiniso, kungcono kakhulu ukusebenzisa lolo lwazi ukusebenza ngokuhlanganisa izindlela eziningi zokufundisa, kodwa kuphela abafundi wayengekho nesithukuthezi enqubeni yokufunda, hhayi ngoba othile wathi kuyasiza ukumuncwa kangcono ulwazi.
Izinhlobonhlobo izindlela zokubukwa we indaba ungawoni. Izingane ujabule ukusekela wena uyoyamukela kulolu hlelo ngoba inqubo yokufunda kuyoba mnandi futhi engavamile. Kodwa ungalithathi impendulo njengoba ubufakazi iqiniso lokuthi lokhu hlobo lwemfundiso usasebenza. Khumbula ukuthi kulesi simo, kuba nomphumela omuhle bungatholakala, kodwa uma kwenzeka, kuba kuphela ngenxa yokuthi bonke abafundi bayoba nentshisekelo kanye abathintekayo ngokugcwele inqubo, hhayi ngoba baqonde kangcono ulwazi, ethula ezihlukahlukene.
Isihluthulelo siwukuba imfundo
Yiqiniso, sikholwa ukuthi kubalulekile kukhombisa nokuchaza abafundisi ukuthi isimiso osekuyisikhathi eside kangaka bakholwa, ayisebenzi. Lokho nje akusiwona njengoba lula njengoba kuzwakala, ngempela. Udokotela wengqondo Norbert Shvarts uthi ngokuvamile lapho sizama ukufakazela yephutha lokwahlulela kwakhe, lokhu kungenziwa kuphela ukuqinisa abaphikisi ukholo abanamalungelo abo. Futhi akunakwenzeka benza abantu bakholelwe anjalo esikhathini esizayo.
Kwanqunywa ukuthi inguquko kancane kancane ukuba umkhawulo noma ukuqedwa zokuqeqeshwa kothisha emayunivesithi kanye nokwethulwa izifundo zokuqeqesha ezikoleni naphula lesi simiso sigxile. Fika kuqeqesha othisha abazoba ngeke uqaphele yalezi zindlela yisikhathi, ngakho ngokuhamba kwesikhathi e-England izikole uhlela ukuqeda lokhu ngemibono.
othisha Young uzoqalisa ukusebenza umkhuba omusha bese uya kusuka yokumisa izinqubo ezithuthukisiwe. Ngaphezu kwalokho, uzovuma, amakhono ethile edingekayo kulesi sikole - ikude indlela abanekhono kakhudlwana ukuze ukuqeqeshwa. Lapha kungenzeka ukuba ngithuthe theory ukuzijayeza esakhiweni, okuyinto ngokungangabazeki elula kakhulu hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa izikhungo kodwa abasebenzi ezingaba khona.
"Indlela Ngaba umbhali," Shmelev. Isifinyezo indaba nokuhlaziya yayo
Uhlu iziphequluli ezidumile namuhla
Umbala elibizayo carmine fashion wesimanje
Ubhavu - accessory okukhethekile okugeza
Khetha lokho kwekhanda ongayenza izinwele naphakathi?
Med. inqubomgomo entsha - kuphi? Ipholisi yomshuwalense yomshuwalense wezokwelapha ayimpoqo